Ndriandahy Mahamoudou: “Tokony hampandinika ny rehetra izao… “ | NewsMada
Ndriandahy Mahamoudou: “Tokony hampandinika ny rehetra izao… “
“Nihena be ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, ary vao mainka nihena izany tamin’ny fifidianana solombavambahaoka. Izao, mihena be ny taham-pandraisana anjaran’ny mpirotsa-kofidina amin’ny fifidianana kaominaly.”
Io ny nambaran’ny tonia mpanatanteraky ny firaisamonina sivily Voifiraisana/PFNOSCM eo anivon’ny Hetsika Rohy, i Ndriandahy Mahamoudou, manoloana ny fahavitsian’ny kandidà amin’izao fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna izao.
Tokony hampandinika ny rehetra izay toe-javatra mifampitohy izay, indrindra ny mpitondra fanjakana na ny mpikarakara fifidianana. Hita amin’izao fa misy zavatra tsy mandeha ao…
Mila hampitoviana lenta ny kandidà
Ny zavatra iray lehibe tsy mandeha, ny rotsa-bola takina amin’ny kandidà izay efa nampitaraina ny rehetra hoe lafo loatra. “Eo koa ny rafi-pifidianana misy. Tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, hita ny tsy fampitoviana lenta ny kandidà. Azo lazaina hoe karazana fangalarana ihany izany satria maka bahana ny matanjaka manitsaka ny madinika eo amin’ny fizotran’ny fifidianana”, hoy izy.
Zavatra tsy tokony hisy izany satria foto-kevitra lehibe mifehy ny fifidianana ny fampitoviana lenta ny kandidà. Raha tsy mipetraka izay, tsy marina ny fifidianana na inona na inona tenina. Efa hita izany tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika sy ny fifidianana solombavambahoaka.
Na ny rotsa-bola amin’ny fifidianana aza, tsy mampitovy lenta ny kandidà. Anjaran’ny Ceni sy ny fanjakana ny mijery hoe: inona ny fepetra tokony horaisina mifanaraka amin’ny lalàna. “Raha tsy ovaina ny fitsipi-dalao, sarotra hatrany ny hahitantsika ny fahazotoan’ny olona hirotsaka ho kandidà amin’ny fifidianana”, hoy ihany izy.